Ukucaciswa kwesitshixo seSony Xperia XA3 Plus kwiGeekbench | I-Androidsis
U-Sony ubonakala ngathi ulungele i-Xperia XA3 Plus, indawo ekumgangatho ophakathi kwinqanaba eliya kuthi lifike kwimarike njengendlalifa ye- I-Xperia XA2 Plus. Oku kucingelwa ngenxa yokuvela kwayo kutshanje kwiGebenbench phantsi kwegama lekhowudi H4493.
Nangona i-benchmark ingacacisi ngokuthe ngqo njenge-Xperia XA3 Plus, ikhowudi yenombolo ebhaliswe kwindawo efanayo yolwazi ilandelela olu luhlu, kungoko, Singabuqinisekisa ubukho bale smartphone kunye nokufika kwayo okukude kakhulu kwintengiso.
Ngokwedatha ebonelelwe nguGeekbench, iselfowuni elandelayo yoluhlu lweXperia XA iza nenkqubo yokusebenza ye-Android 8.0 Oreo. Ukongeza koku, uluhlu lubonisa ukuba i-terminal ixhobisa i-Qualcomm Snapdragon 660 System-on-Chip, into engekhoyo kuthi, njengoko besilindele ukufumana SD670 okanye SD710, ukufuna ngakumbi. Okwangoku, le yokugqibela ibonisa inkqubela phambili ebonakalayo ngaphezulu kwe-chip esetyenziswe kwi-predecessor yayo, eyi-SD630.
Ibhentshi lisibonelela ngolwazi oluphambili: i-RAM. Ngokwale nto, isixhobo siza nobungakanani be-6GB -5.735MB, ukuba ichane ngqo. Kwangelo xesha, inika iinkcukacha ngenani lamanqaku kunye nokuphindaphindwa kweprosesa esele ikhankanyiwe, apho ibhalisa malunga nesibhozo kwisantya esiphezulu se-2.21GHz.
Ekugqibeleni, konke kuza kwiziphumo ezibini: Amanqaku angama-853 kwicandelo elisisiseko esinye kunye ne-4.172 kwicandelo elinemiba emininzi. Oku akunamtsalane, kodwa ngenxa yokudityaniswa okungaqhelekanga kweSpapdragon 660 kunye ne-6GB ye-RAM, i-smartphone ingaphezulu komndilili.
Okokugqibela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba Ezi nkcukacha zeXperia XA3 Plus aziqinisekiswanga, kuba inkampani kufuneka ibaqinisekise, ngokusemthethweni, xa ibhengezwa ngokusesikweni, into esingayi kuba kude ukuyibona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Sony Xperia XA3 Plus iyavela kwi-Geekbench: ii-specs eziphambili zityhilwe